Android - Waraaqaha Xayawaanka | Androidsis
Download ugu fiican sawirrada xayawaanka loogu talagalay qalabkaaga. Haddii aad jeceshahay xayawaanka rabaayadda ah, halkan waxaad ka heli doontaa noocyo kala duwan oo sawir-gacmeedyo leh noocyo kala duwan ah oo xayawaan ah si aad u doorato midka aad ugu jeceshahay.
Xulka xulashada darbiyada ee Android aad buu u weyn yahay. Laakiin haddii aad xiisaynayso asalka xayawaanka, markaa tani waa qaybtaada. Dhexdeeda waxaad ka heli doontaa waraaqaha ugu wanaagsan ee xayawaan leh. Laga soo bilaabo xayawaannada ugu xiisaha badan ilaa xayawaanka duurjoogta ugu xiisaha badan. Wax walba si aad ugu bedesho muuqaalka taleefankaaga habka ugu fudud.
Qeybtaan waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho lacagaha ugu fiican qaybtaan. Sidaas darteed haddii aad jeceshahay xayawaanka, waa inaadan ka maqnaan xulashada ugu fiican ee loogu talagalay taleefankaaga Android.
Hadaad rabto waxbadan waraaqaha darbiga guurguura, ha ka waaban inaad booqato isku xirka aan hadda kaaga tagnay.